वीरगन्जमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरू बढे, दैनिक १ देखि ३ जनासम्मको मृत्यु हुँदै – Jagaran Nepal
वीरगन्जमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरू बढे, दैनिक १ देखि ३ जनासम्मको मृत्यु हुँदै
वीरगन्ज, ६ भदौ । वीरगन्जमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । केही सातायतादेखि कोरोना संक्रमणबाट वीरगन्जमा दिनहुँ एक जनादेखि तीन जनासम्मले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
यसै क्रममा शनिबार बिहान ७:१५ बजे एक पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । बहुदरमाई नगरपालिका वडा नं ४ घर निवासी ६१ वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा शनिबार बिहान मृत्यु भएको नारायणी अस्थायी कोभिड़ अस्पतालका इन्चार्ज डा. निरज सिंहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार खोकी तथा स्वास-प्रस्वासमा समस्या आएपछि भदौ ३ गते स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा भदौ ४ गते उनीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्थायी कोभिड़ अस्पतालको आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेकोमा स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि भदौ ४ गतेदेखि भेण्डिलेटरमा राखेर उपचार भई रहेको थियो । स्वास-प्रस्वासमा समस्या बढ्दै गएको कारण भेन्टिलेटरमा पनि राखेर बचाउन नसकिएको डा. सिंहको भनाइ छ ।
यसैगरी शुक्रबार राति पनि एक पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं २६ सुगौली बिर्ता निवासी ५८ वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । खोकी तथा स्वास-प्रस्वासको समस्याले ग्रसित उनको उपचारको क्रममा वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्थायी कोभिड़ अस्पतालमा मृत्यु भएको डा. सिंहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार भदौ ४ गते ती पुरुषको स्वाब संकलन गरेर नारायणी असप्तालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा भदौ ५ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि भेण्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेकोमा शुक्रबार राति मृत्यु भएको बताए । मृतक दुबै पुरुषको कुनै ट्राभल हिस्ट्री नरहेको बताइएको छ ।
मृतक दुबै पुरुषसँगै वीरगन्जमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २८ पुगेको छ । कोरोना संक्रमणबाट वीरगन्जको नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा हालसम्म ३५ जनाको मृत्य भइसकेको छ ।
मृत्यु हुनेमा पर्सा जिल्लाको मात्रै २८ जना, बाराका ५ जना तथा रौतहटका २ जना रहेका छन् । पर्सामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेका साथै मृत्यु हुनेहरुको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।